11 Iskuulada Animation-ka ugu Fiican Japan 2022
11 Iskuullada Animation ee ugu Fiican Japan
Ma xiisaynaysaa inaad ku kasbato shahaadada naqshadaynta animation? Ka dib si taxadar leh u dhex mara liiska dugsiyada animation-ka ugu fiican ee Japan oo arag tillaabooyinka ku habboon ee aad u baahan tahay inaad qaaddo si aad u noqoto hal-abuure mid ka mid ah farshaxanka adduunka ugu kobcaya.
Japan waa xudunta horumarka tignoolajiyada iyo sayniska. Waxay yihiin soosaarayaasha ugu sarreeya adduunka ee mashiinnada iyo teknoolojiyadda aan ku aragno hareeraha. Xaqiiqda ah in ay yihiin dad caqli badan, oo caqli badan, kama dhigin kuwo caajis ah. Jabbaanku waxay leeyihiin mid ka mid ah fanka ugu midabka badan, ugu xiisaha badan adduunka.
Koritaanka waxaan daawanay bandhigyo anime badan sida Naruto, Dragonball Z, iyo kuwa kale oo badan. Sida aad horeba u ogeydna, Jabbaanku waa maskaxda ka dambaysa dhaqdhaqaaqyada firfircoon ee firfircoon, xiisaha leh. Waa qayb ka mid ah dhaqanka Japan oo intooda badan xitaa waxay ka hadlaan khuraafaadka Japan iyo waxa ay aaminsan yihiin.
Waa qaab farshaxan oo xiisa leh oo hadda mowjadaha adduunka oo dhan ka wada. Fursadaha badan ee goobta lagu soo bandhigay awgeed, waxaa jiray xiiso badan, gaar ahaan dhalinyarada, si ay u noqdaan kuwa noolaha iyo sawirada manga-ga. Sidoo kale, jaamacadaha iyo kulliyadaha Japan iyo waddamo kale ayaa arkay xiisahaas oo hadda loo dhigo barnaamij ahaan.
Haa, taasi waa sax Waxaad ku kasban kartaa shahaadada bachelorka ee animation isla meeshii ay ka bilaabatay - Japan - iyo halka uu dhaqanku yahay mid saafi ah oo run ah. Beerta ayaa si xawli ah u koraysa waana mid ka mid ah shaqooyinka ugu mushaarka badan adduunka. Haddii aad leedahay xirfado farshaxan ama aad u xiisayso animation, waa inaadan ka xishoon ama ka baqin inaad sare u qaaddo xirfadda.
Hase yeeshe, waa inaad raadisaa dugsi wanaagsan si aad u xoojiso xirfadaada, u dhisto shabakad isku xidhid, oo aad la kulanto dad horeba goobta ugu jiray oo aad wax uga barato khibradooda. Iyadoo machadyada sare ee wadamada kale laga yaabo inay baraan animation, maqaalkani wuxuu diiradda saarayaa ka hadalka iskuulada animation-ka ugu fiican ee Japan.
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ka fikirto inaad aado Japan si aad u sii wadato shahaadada animation. Marka hore, tani waa meesha ay asal ahaan ka soo jeedo, sidaas darteed, aad bay ugu fiican yihiin oo waxay haystaan ​​qalabka saxda ah iyo dadka si wax ku ool ah kuu baro. Sidoo kale, jaamacadaha Japan ayaa aad uga jaban ardayda caalamiga ah marka loo eego kuwa kale ee adduunka.
1 Sida wax looga barto Animation gudaha Japan
2 Shuruudaha gelitaanka Dugsiyada Animation ee Japan
3 Sida Loo Helo Deeq waxbarasho oo loogu talagalay Animation gudaha Japan
4 Liiska Dugsiyada Animation-ka ugu Fiican ee Japan
4.1 1. Jaamacadda Kyoto Seika
4.2 2. Kulliyadda Animation Osaka
4.3 3. Dugsiga Naqshadeynta Tokyo
4.4 4. Jaamacadda Fanka ee Tokyo
4.5 5. Yoyogi Animation Academy
4.6 6. Dugsiga Caalamiga ah ee Aoba-Japan
4.7 7. Dugsiga Madadaalada
4.8 8. Tokyo College of Anime
4.9 9. Kulliyadda Madadaalada ee Osaka
4.10 10. Kuleejka Sapporo ee Anime
4.11 11. Tokyo Animator Academy College
Sida wax looga barto Animation gudaha Japan
Si aad wax ugu barato animation gudaha Japan, waxaad si fudud u baahan tahay inaad dhex marto liiskayaga dugsiyada animation-ka ee Japan oo aad dooratid midka xiisahaaga galinaya. Waa inaad hubisaa in jaamacadda ama kulliyadda aad doorato inaad wax ka barato animation inay buuxisay shuruudahaaga iyo heerarkaaga.
Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad ka gudubto shuruudaha gelitaanka kuwaas oo hoos lagu tilmaamay.
Shuruudaha gelitaanka Dugsiyada Animation ee Japan
Ma xiisaynaysaa inaad dhigato dugsiga animation ee Japan? Ka dib hubi inaad buuxisay ama haysato shuruudaha gelitaanka ee soo socda:
Ardayda mustaqbalka dhow waa in ay dhammeeyeen 12 sano oo waxbarasho rasmi ah dalkooda oo ay heleen shahaadada dugsiga sare.
Haysta baasaboor sax ah iyo sawiro baasaboor
Caddaynta diiwaannada maaliyadeed si ay u tusiso inaad awoodid inaad iska bixin karto kharashka waxbarashada oo aad ku nooshahay Japan.
Warqadaha soo jeedinta ee macalimiin iyo macalimiin hore
Qaado imtixaanka TOEFL ama IELTS
Dhammaan qoraalada akadeemiyadeed ee dugsiyadii hore ayaa xaadiray
Warqad mawqif wanaagsan oo ka soo baxday Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalkaaga hooyo
Ku guulaysto imtixaankii jaamacada
Kuwani waa shuruudaha caadiga ah ee lagu baranayo animation ee dugsiyada Japan.
Sida Loo Helo Deeq waxbarasho oo loogu talagalay Animation gudaha Japan
Si aad u hesho deeqda waxbarasho ee animation gudaha Japan waxaad u baahan tahay inaad iska hubiso dugsiga gaarka ah ee aad codsanayso si aad u ogaato inay bixiyaan deeqo waxbarasho iyo in kale. Inta badan jaamacadaha iyo kuleejyada Japan waxay siiyan deeqo waxbarasho ardayda caalamiga ah si ay u sii wataan barnaamijka ay doorteen oo aad ka dib codsan karto shahaadadaada animation.
Si haddii dugsiga aad codsanayso uu bixiyo deeqo waxbarasho, waxaad si fudud u baahan tahay inaad la xiriirto xafiiska oggolaanshaha ama aad ka hubiso shabakadooda deeqaha waxbarasho iyo fursadaha gargaarka maaliyadeed. Haddii wax deeq waxbarasho ah la heli karo, hubi inaad buuxisay shuruudaha u-qalmitaanka ka hor intaadan codsan.
Iyadoo si cad loo arkay, aan galno dugsiyada animation-ka ugu fiican ee Japan.
Liiska Dugsiyada Animation-ka ugu Fiican ee Japan
Waxaa jira iskuulo animation badan oo Japan ku yaal laakiin kuwa ugu wanaagsan oo kaliya ayaa lagu qeexay oo looga hadlay qoraalkan. Xiriirinta mid kasta oo ka mid ah dugsiyada ayaa la siiyay si ay kuu siiyaan hagitaan dheeraad ah haddii aad aragto mid ka mid ah dugsiyada xiisahaaga. Xiriirinta, waxaad sidoo kale ku baran doontaa habka codsiga, kama dambaysta ah, iyo fursadaha deeqaha waxbarasho ee la heli karo. Akhris wacan
Jaamacadda Kyoto Seika
Kulliyadda Animation Osaka
Dugsiga naqshadeynta Tokyo
Jaamacadda Fanka ee Tokyo
Iskuul Media hiwaayadda ah
Kulliyadda Anime ee Tokyo
Kulliyadda Madadaalada ee Osaka
Kuliyadda Sapporo ee Anime
Kulliyadda Animator Academy ee Tokyo
Liiskayaga ugu horreeya ee dugsiyada animation-ka ugu wanaagsan ee Japan waa Jaamacadda Kyoto Seika, kulliyad gaar ah oo ku taal Iwakura, Kyoto, Japan, oo caan ku ah bixinta tacliinta tayada leh ee animation. Jaamacaddu waxay aad diiradda u saartaa waxbarashada animation waxayna hoy u tahay Kulliyadaha Fanka, Naqshadaynta, Manga, Dhaqanka caanka ah, Bani'aadamnimada, iyo Dugsiyada Qalinjabinta.
Kulliyadahan, Jaamacadda Kyoto Seika waxay tababartaa oo ku qalabaysaa ardayda xirfado ku filan si ay mustaqbalka u noqdaan animators iyo sawir-qaadayaasha manga. Qaar ka mid ah koorsooyinka la bixiyo ayaa ah farshaxanka kartoonka, fanka majaajilada ah, rinjiyeynta saliidda, animation, naqshad dhijitaal ah, iyo naqshad garaafyo. Dhammaan koorasyada waxaa lagu dhigaa Jabbaan, ardayda caalamiga ahna waa la aqbalaa.
Isku xirka websaydhka dugsiga
2. Kulliyadda Animation Osaka
Haddi aad rabto inaad noqoto fanaan cod badan, naqshadeeye garaaf, animator, ama sawir gacmeed, Kulliyada Animation Osaka ayaa meesha kuugu taal. Waxaad si tartiib tartiib ah u baran doontaa xirfadaha aasaasiga ah waxaadna hagaajin doontaa kartidaada ilaa heer wax ku ool ah oo waxaad noqon doontaa animator xirfad leh aqoon fiicanna u leh farsamooyinka analoogga iyo dhijitaalka ah labadaba.
Dhammaan koorsooyinka waxaa lagu dhigaa Jabbaan, wax yarna waxaa lagu dhigaa Ingiriis. Koorasyada lagu dhigo Ingiriisiga waa Soo saarista Anime, Koorsada Animator, Koorsada Majaajilada oo Dhamaystiran, Koorsada Majaajilada Sheeko, iyo Koorso Nakhshad Dabeecad. Tas-hiilaadka wax-soo-saarka ayaa diyaar u ah ardayda si ay kor ugu qaadaan xirfadahooda wax-ku-oolka ah oo ay la shaqeeyaan xirfadlayaasha goobta.
3. Dugsiga Naqshadaynta Tokyo
Tokyo Designer School waa mid ka mid ah iskuulada animation-ka ugu wanaagsan Japan oo bixiya barnaamijyo tacliin oo kala duwan oo daboolaya animation iyo dhammaan noocyada naqshadeynta. Machadku waxa uu kobciyaa naqshadeeyayaasha leh aragti ballaadhan iyo xirfado iyo manhaj wax ku ool ah oo buuxiya baahida goobta naqshadaynta ee hadda jirta.
Iskuulku wuxuu leeyahay 11 waaxood oo daboolaya dhammaan dhinacyada naqshadeynta, oo bixiya koorsooyin aad u gaar ah oo abuuraya xirfadlayaal karti leh. Koorasyada la bixiyo waa animation, ciyaarta abuurka, manga, naqshadaynta jilayaasha, iyo garaafyada kumbuyuutarka.
4. Jaamacadda Fanka ee Tokyo
Jaamacadda Farshaxanka ee Tokyo waa dugsi farshaxan oo sumcad leh oo Japan ku yaal oo bixiya barnaamijyo animation iyo noocyada kale ee sawirka iyo naqshadeynta. Waa dugsi dadweyne oo ku yaal Taito, Tokyo, Japan laakiin wuxuu tas-hiilaad ku leeyahay Toride, Ibaraki, Yokohama, Kanagawa, Kitasenju, iyo Adachi dhammaan Tokyo. Koorsooyinka halkan lagu bixiyo waxay u horseedayaan shahaadada koowaad ee jaamacadda ama shahaadada sare.
Jaamacaddu waxay u qaybsantaa Kulliyadaha Farshaxanka Fine, Muusiga, iyo Dugsiyada Qalinjabinta ee Farshaxanka Fine, Muusiga, Filimada, iyo Warbaahin Cusub. Deeqo waxbarasho iyo fursado kaalmo lacageed ayaa la siiyaa ardayda si loo dhimo culayska waxbarashadooda laguna dhiirigeliyo inay raacaan riyadooda.
Dugsigan animation-ka Jabbaan waa machadka animation iyo farshaxanka ugu weyn Japan oo leh sumcad sare. Waxay ka mid tahay iskuulada animation-ka ugu wanaagsan ee Japan, dhammaan koorsooyinkana waxaa lagu dhigaa Jabbaan sidaa darteed ardaydu waa inay awood u yeeshaan inay si buuxda u fahmaan luqadda Jabbaan si ay u dhigtaan Dugsiga Animation Yoyogi.
Machadku wuxuu xarumo ku leeyahay Miyazaki, Takamatsu, Sendai, Sapporo, Hiroshima, Fukuoka, Tokyo, Harajuku, Osaka, Hachioji, Nagoya, iyo Wakayama. Mid kasta oo ka mid ah xarumahan ama xarumahan waxay leedahay astaamo, koorsooyinkana si kala duwan ayaa loo dhigaa. Koorsooyinka la bixiyo waxaa ka mid ah animation, multimedia hal-abuure, sawir-qaadis, hawl-wadeen AV, iyo farshaxan animation dhijitaal ah.
6. Dugsiga Caalamiga ah ee Aoba-Japan
Dugsiga Caalamiga ah ee Aoba-Japan waa mid kale oo ka mid ah iskuulada animation-ka ugu fiican Japan oo leh laba xarumood oo ku yaal Hikargoaka iyo Meguro. Ardaydu waxay go'aansan karaan inay codsadaan midkoodna, waxay bixiyaan barnaamijyo isku mid ah laakiin deegaanku way ka duwan yihiin taas oo ah waxa ardaydu u baahan yihiin inay iska ilaaliyaan ka hor intaysan dirin codsiyada. Hubi inay tahay deegaan ku habboon baahiyahaaga.
Machadku waxay aqbashaa ardayda caalamiga ah waxayna isticmaashaa manhaj caalami ah si ay u horumariso hogaamiyayaasha mustaqbalka, ganacsatada, iyo hal-abuurayaasha goobta naqshadaynta animation, ku jilida codka, iyo naqshadaynta ciyaarta. Koorasyo ​​faro-ku-tiris ah ayaa lagu dhigaa Ingiriisi si loo qanciyo baahiyaha ardayda caalamiga ah ee imanaya iyo tas-hiilaadka aadka u wanaagsan iyo agabka si joogto ah ayaa loo heli karaa si ay u taageeraan waxbarashada khibradda leh ee ardayda.
7. Dugsiga Madadaalada
Iskuulka Warbaahinta Madadaalada waxaa lagu aasaasay 1993 gudaha Shibuya, Tokyo, Japan wuxuuna sii wadaa bixinta bixinno tacliineed oo tayo leh iyo manhaj cusub si uu u daboolo baahiyaha ardayda oo uu ugu habboonaado qaabka ganacsi ee hadda jira iyo baahiyaha goobta animation. Dugsiga multimedia wuxuu bixiyaa barnaamijyo tababar oo noocyo kala duwan ah oo nakhshad ah sida kombuyuutar iyo naqshadeynta sawirada, animation, naqshadaynta ciyaarta, sawirka manga, iyo cod-kordhinta.
Dugsigu wuxuu ardayda ku qalabeeyaa farsamooyinkii naqshadaynta animation-kii ugu dambeeyay wuxuuna ku xidhaa shabakad xirfad leh oo ah shakhsiyaadka guulaysta goobta si ay u helaan fikrado ganacsi oo waxtar u yeelan kara u beddelka xirfaddaada shaqo guul leh.
Kulliyadda Anime ee Tokyo waxay ku taal Nishikasai, Edogawa-Ku, Tokyo waana mid ka mid ah iskuullada animation-ka ugu fiican Japan oo ay tahay inaad ku darto liiskaaga. Waxaad ku qaadan kartaa koorsooyin ku saabsan jilida codka, naqshadeynta anime, ama e-Sports kuwaas oo caadi ahaan qaata 2-3 sano in la dhammaystiro, oo ku biir bulshada sii kordheysa ee naqshadeeyayaasha animation si aad shaqadaada ugu sheegto Japan iyo adduunkaba.
Ardayda caalamiga ah waa la aqbalay waxaana jira xafiis loogu talagalay ardayda caalamiga ah halkaas oo aad ka heli karto dhammaan faahfaahinta aad u baahan tahay si aad u dalbato. Barnaamijyada kale ee la bixiyo waxaa ka mid ah Digital CG animation major, anime sound major, novel & scenario major, super pro gamer major, maamulka e-sports weyn, iyo sawirida & naqshadaynta dabeecada weyn.
9. Kulliyadda Madadaalada ee Osaka
Kulliyadda Madadaalada ee Osaka waa mid ka mid ah iskuulada animation-ka ugu fiican Japan. Waxay ku taal Nishinakajima, Yodogawa-ku, Osaka. Kulliyada waxaa loogu talagalay in lagu tababaro oo lagu horumariyo awooddaada qaabab farshaxan oo kala duwan oo u dhexeeya cod jilidda iyo animation ilaa naqshadaynta jilayaasha iyo barnaamijka ciyaarta. Koorasyadan waxaa lagu bixiyaa 8 waaxood oo kala ah;
Ciyaar / animation 3DCG
Sheekooyinka fanka suugaanta
Barnaamijyada hal-abuurka leh ayaa lagu bixiyaa waaxyadan si kor loogu qaado xirfadaada oo loo horumariyo awoodahaaga si looga dhigo lambarka 1 ee warshadaha.
10. Kuleejka Sapporo ee Anime
Liiskayaga tobnaad ee iskuulada animation-ka ugu fiican ee Japan waa Sapporo College of Anime, oo ah dugsi animation iyo garaafyo caan ah oo ku yaal Japan. Dugsigu waxa uu inta badan diirada saaraa sawirada anime iyo manga mana bixiyo koorsooyinka naqshadaynta ciyaarta/barnaamijka sida kuwa kale. Ardayda halkan si fudud ayay ula kulmi karaan maskaxo kale, maadaama barnaamijka la bixinayaa aanu ahayn mid aad u ballaadhan, oo ay wadaagaan fikrado iyaga kor ugu qaadi kara warshadaha.
Ardayda caalamiga ah waa lagu soo dhaweynayaa inay codsadaan mid ka mid ah koorsooyinka lagu bixiyo Sapporo. Koorasyadani waa Manga Major, Sawirka Majaajilada, Jilaa Codka Weyn, Heesta Anime, iyo Animator.
Ugu dambeyntiina, laakiin ugu yaraan dugsiga animation-ka ugu fiican ee Japan waa Kulliyada Animation-ka ee Tokyo. Kuleejku wuxuu bixiyaa afar koorso oo xirfadle ah oo ku saabsan jilida codka, animation, sawir-gacmeedka, iyo sawir-qaadista. Koorasyadan waxaa loogu talagalay in lagu qalabeeyo ardayda xirfadaha iyo isku xirnaanta ay u baahan yihiin si ay ugu guulaystaan ​​xirfadahooda shaqo.
Habka codsiga iyo wakhtiga kama dambaysta ah waxaa laga heli karaa xiriirka hoose.
Tani waxay soo afjaraysaa iskuulada animation-ka ugu wanaagsan ee Japan waxaanan rajaynayaa inay kaa caawiyaan inaad gaadho riyadaada ah inaad noqoto animator, jilaa cod, ama sawirqaade manga. Tani waa goob xiiso leh, madadaalo leh oo ay iska caddahay manga iyo anime-ka aan ku aragno hareeraha iyo haddii aad leedahay karti ama hami, ha ka waaban inaad sii wado.
Immisa ayay ku kacaysaa in lagu barto animation gudaha Japan?
Qiimaha barashada animation ee Japan ayaa u dhaxaysa 50,000 yen ilaa 300,00 yen iyadoo ku xidhan dugsiga aad dhigato.
Immisa sano oo kulliyad ah ayaad u baahan tahay si aad u noqoto animator gudaha Japan?
2-3 sano ayaa loo baahan yahay si loo dhamaystiro barnaamijka animator gudaha Japan
Ardayda caalamiga ahi ma wax ku baran karaan animation gudaha Japan?
Qaar ka mid ah iskuulada animation ee Japan ayaa aqbala ardayda caalamiga ah laakiin ardaydu waa inay si fiican u yaqaanaan Ingiriisiga ama Jabbaan.
Ma ku baran karaa animation gudaha Japan Ingiriisi?
In yar oo ka mid ah dugsiyada animation-ka caalamiga ah ee Japan ayaa bixiya barnaamijyo animation ah oo ku qoran luqadda Ingiriisiga si loo qanciyo baahiyaha ardayda caalamiga ah.
5 Kulliyadaha Naqshadeynta Ciyaaraha Sare iyo Jaamacadaha loogu talagalay Naqshadeynta Ciyaaraha Weyn
Koorsooyinka Naqshadeynta Dhismaha ee Bilaashka ah ee 13
6 Dugsiyada Injineeriyada Aerospace ee ugu Fiican Texas
15 Dugsiyada Hoose ee ugu Fiican Toronto
Previous Post:8 Jaamacadaha ugu jaban Nederlaan
Post Next:6 Talooyin ah oo ku saabsan Sida TEFL loogu shahaado Shahaado la'aan Ardayga